के यो डबल-साइड टेपको ट्रेस हटाउन गाह्रो छ? चीजहरूलाई चोट पुर्‍या नगरिकन यसलाई सजिलैसँग प्राप्त गर्न धेरै विधिहरू साझेदारी गर्नुहोस् - समाचार - Wandatape
विशाल स्टिकी रोलर मोप
स्टिकी रोलर मोप रिफिल
ह्यान्डल स्टिकी रोलर
स्टिकी रोलर रिफिल ह्यान्डल गर्नुहोस्
डबल पक्षीय टेपहरू
ठोस डबल पक्षीय ऊतक टेप
उच्च घनत्व डबल पक्षीय पॉलिएस्टर टेप
उच्च घनत्व डबल पक्षीय रबर कपड़ा टेप
उच्च घनत्व डबल पक्षीय फोम टेप
उच्च घनत्व कपडा टेप
उच्च घनत्व डबल पक्षीय कपडा टेप
स्टिकी लिन्ट रोलर टेप
चिपकने रोलर टेप
स्टिकी पेपर रोलर
घरपालुवा जनावर कपाल स्टिकी हटाउने
के यो डबल-साइड टेपको ट्रेस हटाउन गाह्रो छ? चीजहरूलाई चोट पुर्‍या नगरिकन सजीलै प्राप्त गर्न धेरै विधिहरू साझेदारी गर्नुहोस्
दुई-पक्षीय टेप व्यापक रूपमा जीवनमा प्रयोग गरिन्छ। दुई चीजहरूलाई अधिक दृढ र रचनात्मक बन्धनको लागि, डबल-साइडेड टेप पातलो हुन्छ र कडा स्टिकनेस हुन्छ।
कुनै चीजले डबल-साइडेड टेप प्रयोग गरे पछि डबल-साइड टेप हटाउन अझ गाह्रो हुन्छ। आज म तपाईंसँग डबल-साइड टेप सजिलै सफा गर्न केहि सुझावहरू साझेदारी गर्दछु।
कूप १, यदि तपाईंसँग कपडा इस्त्री मेसिन छ वा घरमा बिजुलीको फलाम छ भने तपाईं दुईपट्टि टेप तात्न सक्नुहुन्छ किनभने इलेक्ट्रिक फलाम वा कपडा इस्त्री मेशिनले पानीको बाफ उत्पादन गर्दछ, र पानीको बाफ छिटो चिपकने पगाल्न सक्छ। एक छोटो पछि तपाईं सजिलैसँग अन्य चीजहरू हानी नगरी आफ्नो हातले डबल पक्षीय टेप फाल्न सक्नुहुन्छ।
दुई जोडौं, तातो हावामा हेयर ड्रायर खोल्नुहोस्, र त्यसपछि दुई मिहिने टेपमा सीधा उड्नुहोस्, केहि मिनेट को लागी यस्तो। यस प्रक्रियाको क्रममा, डबल-साइडेड टेप तातो हुन्छ र चिपचिपी कमजोर हुन्छ। यस समयमा, तपाईं सीधा आफ्नो हातको साथ डबल पक्षीय टेप हटाउन सक्नुहुन्छ। यदि यसलाई हटाउन अझै गाह्रो छ भने, तपाईं पोटीटी चक्कु प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ यसलाई बिस्तारै हटाउनका लागि।
कूप 3, एउटा सुख्खा राग तयार गर्नुहोस् र रक्सीको साथ डुब्नुहोस्। यदि यसमा राम्रो नail हटाउने प्रभाव छ भने, डबल-साइड टेपमा र्याग थिच्नुहोस् र १ देखि २ मिनेट कुर्नुहोस्। जब समय सकियो, एउटा पोटीन चक्कु वा बैंक कार्डको किनारा प्रयोग गरी तालिकाको शीर्ष ग्लुलाई बिस्तारै स्क्र्याप गर्नुहोस्।
मलाई तपाईंसँग डबल पक्षीय स्पञ्ज टेप हटाउने बारेमा केहि बढी साझेदारी गर्नुहोस्, किनकि डबल-पक्षीय स्पंज टेप अधिक दृढतासाथ चिप्लन्छ र मोटा हुन्छ। माथिको विधि प्रयोग गर्न सजिलो छैन।
कूप १: यदि तपाईंसँग माछा मार्ने लाइन वा दन्त दन्त फ्लस छ भने, तपाईं माछा मार्ने लाइन कडा गर्न दुई हात प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, र त्यसपछि माछा मार्ने लाइनलाई डबल-पक्षीय स्पन्ज टेप मुनि कडा गरी राख्नुहुनेछ, र त्यसपछि बिस्तारै तल तान्नुहोस्। यसले लामो लिन सक्दैन। टेप भित्ताबाट हटाउन सकिन्छ।
दुई कप, एक कचौरा तयार गर्नुहोस्, तातो पानी, डिटर्जेंट र यसमा सेतो सिरका को एक सानो मात्रा थप्नुहोस्, र त्यसपछि यी तरल पदार्थहरू सँगै मिसिन र फोम गर्नको लागि हलचलिरहनुहोस्। पानीमा सुक्खा तौलिया राख्नुहोस् र त्यसपछि तौलिया प्रयोग गरी दुईपट्टि टेप स्क्रब गर्नुहोस्। जब टेप रोल अप हुन्छ, तपाईं टेप भित्ताबाट तपाईंको हातहरू वा बैंक कार्डबाट हटाउन सक्नुहुनेछ।
माथिका विधिहरू प्रयोग गरेर, डबल-साइडेड टेप हटाए पछि, यदि त्यहाँ बाँकी टेपको सानो अंश छ भने, तपाईं स्पन्ज प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। राउगर छेउ पुछ्नका लागि स्पन्ज प्रयोग गर्नुहोस्, हल्का हल्का तरीकाले।
यदि मेरो लुगाहरू टाँसिएको छ तर कुनै स्टिकी रोलर छैन भने म के गर्ने?
ठेगाना: नम्बर Y युटि road सडक, लियूटिंग स्ट्रिट, चेy्याang्ग जिल्ला, क़िंगदाओ, शेन्डong्ग प्रान्त
हाम्रो उत्पादनहरू वा प्रिसेलिस्टहरूको बारेमा सोधपुछको लागि, हामीलाई स्टिकी रोलर, स्टिकी पेपर रोलर, चिपकने रोलर टेप। कृपया तपाईंको ईमेल हामीलाई दिनुहोस् र हामी २ 24 घण्टा भित्र सम्पर्कमा रहनेछौं।
यदि मेरो लुगाहरू टाँसिएको छ तर कुनै स्टिकी रोलर छैन भने म के गर्ने?2021/01/05
त्यहाँ जहिले पनि धेरै चिपचिलो कपालको कपडा हुन्छन्। यस समयमा हामी सबै कपालहरू हटाउन स्टिकी रोलर प्रयोग गर्ने छौं, तर यदि कपाल स्टिकि रोलर भर्खरै सकियो र तपाईं यसलाई किन्न कुर्नुहुन्न, तपाईंले के गर्नुपर्छ?
के यो डबल-साइड टेपको ट्रेस हटाउन गाह्रो छ? चीजहरूलाई चोट पुर्‍या नगरिकन सजीलै प्राप्त गर्न धेरै विधिहरू साझेदारी गर्नुहोस्2020/12/23
प्रतिलिपि अधिकार २०२० क्विंगदाओ वान्डा टेप उत्पादहरू CoLtd सबै अधिकार सुरक्षित। - स्टिकी रोलर, स्टिकी पेपर रोलर, चिपकने रोलर टेप